I-Snapchat ibeka ubuso obusha nezithonjana, zisho ukuthini? | Izindaba zamagajethi
UPablo Aparicio | | AmaSelula, Izaziso, Amanethiwekhi omphakathi
Isicelo esheshayo futhi «sangasese» sokuthumela imiyalezo I-Snapchat isanda kuvuselelwa ngokuthuthuka okumnandi, phakathi kwabo sithola amabheji amasha wokuqonda kangcono oxhumana nabo, isigaba esisha esibizwa nge- "Needs Love" nemodi yasebusuku yekhamera.
I-Snapchat ibilokhu idonswa ngamandla muva nje, kusukela lapho bekuphakanyiswa khona ukuvimba amaklayenti avela eceleni aqhamuke ngokuzumayo ngomusa kaSnapchat wokukwazi ukukhawulela ukulawula okuthumelayo, amafayela wengxoxo nowe-multimedia futhi akuvumelayo (noma ukuvumele) ukusindisa lawa mafayili kanye nomlando wengxoxo.
1 Okushiwo izithonjana ze-Snapchat
2 Ubuso obumomothekayo
3 Ubuso obumamatheka kakhulu
4 Ubuso nezibuko zelanga
5 Ubuso obuncane bubheke eceleni
6 Inhliziyo yegolide
8 Ezinye izici ezintsha zesibuyekezo se-Snapchat
Okushiwo izithonjana ze-Snapchat
Sekuyisikhathi eside kusukela uSnapchat aqala ukuvimba amaklayenti avela eceleni, into ebingabonwa kahle ngabasebenzisi abaningi. Mhlawumbe ukukhokhela le nhlangano, isicelo manje sabuyekezwa cishe unyaka owedlule ngezindaba ezithokozisayo. Phakathi kwalezi zinto ezintsha, mhlawumbe bekukhona eyodwa evelele ngaphezu kwezinye: some ama-smileys amasha ku-Snapchat emise njenge-emoji evela eceleni kokubuka kuqala izingxoxo. Kepha busho ukuthini lobu buso obuncane nezinye izimpawu? Yebo, yize kungenzeka ukuthi usuyabazi futhi uyazi incazelo yawo, sizokuchazela ngezansi.
Uma sibona ubuso obumoyizelayo eceleni komunye woxhumana nabo, kusho ukuthi lo oxhumana naye unguye omunye wabangane bethu abakhulu ku-Snapchat, kodwa hhayi okuhle kakhulu. Njengoba kunendawo eyodwa kuphela ebekelwe okungcono kakhulu, lo mngani angaba owesibili, owesithathu noma ngaphezulu, kepha, ngaphandle kokuthi siqhubeke nokuxoxa naye futhi sishintshe isithonjana sakhe sibe yinhliziyo yegolide, akayena umhlabeleli .
Ubuso obumamatheka kakhulu
KuSnapchat sinezinhlobo ezimbili zobuso obumomothekayo: obunokuqonda okuthe xaxa lapho kugobeke khona umlomo kuphela namehlo avaliwe futhi okunye okucacisayo ngamehlo avulekile nalapho amazinyo abonakala khona. Uma sibona okwesibili kwalokhu kumamatheka ngaphezu komunye woxhumana nabo, kusho ukuthi umngane wethu omkhulu unombolo 1 ngumngane wakhe omkhulu kunombolo 1.
Akubona ubuso obulula ukububona, ngoba uma nginomngane ogama lakhe linguVicente njengomngane wami omkhulu kunombolo 1, uVicente naye kufanele abe ngumngane omkhulu womngane wesithathu ogama lakhe lingu-Andrés, ngakho-ke uVicente kufanele abe nabangane ababili abakhulu kunabo bonke.
Ubuso nezibuko zelanga
Uma sibona ubuso obunezibuko zelanga eduze komunye woxhumana nabo, akusho ukuthi lo oxhumana naye usendaweni lapho kunelanga kakhulu khona, cha. Okushiwo yilokho omunye wabangane bethu abakhulu ungomunye wabangane bakhe abakhulu. Isibonelo, nginoxhumana naye ogama lakhe linguPepe ongomunye wabangane bami abakhulu (angaba ongcono kunabo bonke, kepha hhayi uma lowo mngane engcono kakhulu kubo bobabili, okukhona esinye isithonjana). Nginomunye umngani ku-Snapchat ogama lakhe linguJosé. Yebo, uma uPepe engomunye wabangane abakhulu bakaJosé, ngizobona i-emoji yobuso enezibuko zelanga engxoxweni kaJosé, uJosé uzobona i-emoji yobuso enezibuko zelanga ngaphezulu kwengxoxo yami futhi uPepe akabonanga yisiphi isithonjana noma abone eyodwa ngokubheka eceleni, inhloso yayo esizophinde siyichaze ngokuhamba kwesikhathi.
Ubuso obuncane bubheke eceleni
Le emoji isetshenziswa kabanzi ezimweni eziningi zemvelo ehlukile. Kungasho into efana nokuthi “Sengikubonile”, kungasho ukuthi “yebo, yebo…” noma nokuthi uyamthanda umuntu omthumela kuye. Ngenhlanhla, ku-Snapchat incazelo yayo icace bha: uma sibona ubuso bubheke eceleni eceleni komunye woxhumana nabo, kusho ukuthi singumngani wakho omkhulu, kepha akayona eyethu. Isibonelo, uma sengikhulume kakhulu nomngani wami uPepa kanti uPepa akaphindanga waxoxa nomunye umuntu, sizoba ngomunye wabangane bakhe abakhulu. Kepha uma sine-Snapchatted ngaphezulu nomunye umuntu, sizoba nomunye noma omunye umngane omkhulu. Kulokhu, sizobona ubuso obukeka bucela engxoxweni kaPepa kanti uPepa uzobona ubuso obumomothekayo.
Uma sibona inhliziyo yegolide engxoxweni yomunye woxhumana nabo, kucatshangwa ukuthi sinobudlelwano obuhle ku-Snapchat naloyo muntu. Inhliziyo yegolide isho ukuthi thina Singumngani wakho omkhulu kunombolo 1 futhi lowo muntu umngane wethu omkhulu kunombolo 1. Bathi noma ngubani onomngane unengcebo, akunjalo? Yebo, lowo mcebo umelwe ku-Snapchat nge-emoji yenhliziyo yegolide.
El isithonjana samalangabi Singasho sisebenzisa isisho se-Anglo-Saxon ukuthi okwamanje "sivutha" naloyo muntu. Kwezemidlalo efana ne-basketball, ikakhulukazi uma kuyi-NBA ngoba idlalwa ezweni elikhuluma isiNgisi, lapho umdlali edubula amahlandla amaningi elandelana futhi eshaya amaphuzu, kuthiwa "uvutha umlilo", okuhunyushelwe ngqo kuye "ku" kodwa sizosebenzisa igama elingaphezulu "ukuxhuma." KuSnapchat, uma sibona amalangabi ngaphezu kwengxoxo yomunye woxhumana nabo, kusho ukuthi "sixhunyiwe" ngalowo oxhumana naye, ngomqondo wokuthi besilokhu sishintsha izingxoxo naye (imiyalezo ethunyelwe neyamukelwa) ngesikhathi izinsuku eziningana ezilandelanayo. Ngokusobala, njengayo yonke imicu, ilangabi lizophuma uma siyeka ukuxoxa naloyo oxhumana naye.
Ezinye izici ezintsha zesibuyekezo se-Snapchat
Ngaphezu kwezimpawu ze-Snapchat esizishilo, kukhona nokuthuthuka kwekhamera futhi manje osekuyi- isithonjana se-crescent eduze kwe-flash switch, ukuyicindezela kuzokwenza ikhamera yethu iphakamise ukuzwela kwe-ISO ukuze kuthathwe izithombe ezicacile ezimweni zokukhanya okuphansi, yize kufanele sazi ukuthi lokhu kuholela ekulahlekelweni kwekhwalithi kumphumela, kushiya umsindo omningi esithombeni:
Futhi ekugcineni sizoba nesigaba esisha esibizwa «Badinga uthando» lapho okuzovela khona oxhumana nabo ebesikade sibathumela izifinyezo kodwa nganoma yisiphi isizathu siyekile ukukwenza.
Phakathi kwalokhu nesilinganiso esisha sikaSnapchat se vimba ukusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza ezivela eceleni futhi ngaleyo ndlela kuvimbele ubumfihlo babasebenzisi bayo ukuthi bonakaliswe, uhlelo lokusebenza nensizakalo bathatha inkambo enhle, nokuthi vele bayindlela ephumelelayo ngokuthumela izithombe, ngokungafani ne-Whastapp, laba bantu bayazi ukuthi ukuba phezulu kuhlanganisa umthwalo omkhulu wemfanelo, futhi basebenza ngezinto ezintsha ezisikhuthaza ukuthi siqhubeke nokusebenzisa uhlelo lwabo lokusebenza, izici ezintsha ezingezwe kulabo abasanda kwethulwa, njengesigaba «Thola», lapho singabona khona izindaba ezincane ezivela eziteshini ezaziwa umhlaba wonke njengeNational Geographic.
Ngokuqondene nokusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza ezivela eceleni, noma ngubani ozama khona manje, okungenzeka ukuthi bazothola iphutha bethi akukwazanga ukuxhuma kuseva, uma kwenzeka bengakutholi kumane kuyindaba yesikhathi, i-Snapchat ibuyisa ukufinyelela kumaseva abo ngalolu hlobo lwezicelo ezingekho emthethweni, okusizuzisa kakhulu.
Njengoba imininingwane yezobunhloli ye-NSA ishicilelwe, singabasebenzisi abaningi ngokwengeziwe ababheka kakhulu ubumfihlo bethu. Ngokuqondene nezicelo zokuthumela imiyalezo, yize iWhatsApp iqhubeka nokulawula lo makethe, besilokhu sifuna izinketho ezisithembisa zona (yize zingaqamba amanga kithi) ubumfihlo obufana nobabo, njengeTelegram, olunye lwezinhlelo zokusebenza eziphephe kakhulu ezitholakala kunoma iyiphi ipulatifomu , noma Snapchat, olunye uhlelo lokusebenza oluphephe kakhulu olusinikeza nemisebenzi ethakazelisa kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-Snapchat ivuselelwa ngokuthuthuka okuthakazelisayo
Amazwana ayi-33, shiya okwakho
Abasebenzisi beWindows Phone bazuza kakhulu ngokuvimba izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni, ikakhulukazi ngenxa yenketho abasinika yona ngokusemthethweni, okungeyona futhi engekho ekunakekeleni noma isiphi isicelo senkxaso. Kuyamahloni futhi akunamsebenzi omkhulu. Akekho umphathi we-CEO okufanele avumele inkampani yakhe ukuthi isondele emakethe, nangaphansi kweyodwa lapho abasebenzisi bayikhalela khona.
Ubuso obuseceleni kungenzeka ukuthi ngomuntu onayo usuzothola inhliziyo yegolide! UJ
Ubuso obuseceleni busho ukuthi lowo muntu unabo njengabangane abakhulu kanti wena awunabo!
Kungani izinombolo ziseduze kwezithonjana?
Ngiyakholelwa, njengoba kusho u-Ana, ukuthi ubuso obusemaceleni ngumuntu onabo njengabangane abakhulu kodwa wena ungenalo.
Ngokusho kwami, ubuso obuseceleni kulapho uthatha izithombe-skrini zalowo omunye umuntu ...
Zisho ukuthini izinombolo?
Ubuso obukeka bucela kusho ukuthi ungumngani wakhe omkhulu kepha akayena owakho !!!
Ngabe busho ukuthini ubuso obuncane obubonisa zombili izingxenye zamazinyo ????? <—— esaaa !!
Ubuso be ???? kusho ukuthini?
Futhi busho ukuthini ubuso obushubile?
Ubuso obubheke eceleni bubeka ukuthi lowo muntu unawe phakathi kwezintandokazi zakhe kepha awunaye lowo muntu phakathi kwezintandokazi zakho
Ngiyabonga kakhulu ngokubambisana kwakho, ngivuselele okufakiwe okususelwa ekutheni kunabantu abaningana abaqondana nencazelo, okungenza ngikholelwe ukuthi kuyiqiniso (futhi njengoba ngibonile ukuthi kuyiqiniso empilweni yangempela, kuqinisekiswe).
Ekugcineni sengibonile ukuthi ubuza ngobuso obusha, iqiniso ukuthi angizange ngibabone, uma ungathumela isithombe-skrini ngizoqala ukuphenya ngaso, ungakhohlwa ukwabelana ngendatshana, hhayi ngeze, kepha ngoba Ngingowokuqala Ngake ngababona ngangilahlekile kancane, futhi lokhu kungasiza abantu bazi ukuthi lolu daba lumayelana nani, ukubingelela okuhle kubo bonke abafundi abenza umsebenzi wethu uphumelele! 😀
Bengifuna ukushicilela isithombe ngobuso enganginokungabaza ngabo kepha angikwazi noma angazi ukuthi ngizosishicilela kanjani
Ngiyabonga kakhulu ngokufuna ukufaka isandla ^ ^ ukufaka isithombe ongasilayisha ku- "http://www.imgur.com/" bese kamuva uthumele isixhumanisi lapha, sikufisela inhlanhla!
Zisho ukuthini izinombolo ?????
Angiyitholi inyanga ngoba namavidiyo aya eba mnyama ngaphandle kokufuna kwami
Kulabo ababuza ngobuso obumomothekayo futhi obucwebile kusho ukuthi lowo muntu ungumngani omkhulu womngani wakho omkhulu 🙂
UKellymar Perez Ramirez kusho
Phendula uKellymar Perez Ramirez
Ngabe ukhona owaziyo ukuthi lobu buso ku-snap buyini?
Ngabe ukhona ongasho ukuthi izinombolo zisho ukuthini?
Ubuso obuncane bamazinyo? kusho ukuthi babelana ngomngane ofanayo omkhulu # 1
? zombili ziyi # 1 enye
? bano # 1 umuntu ofanayo
? Bangabangane abakhulu
? yabelana ngomngani omkhulu
? ukubangani bakhe abakhulu kodwa akekho kwabakho
? zithwebula kaningi
Ngingayenza kanjani inhlendla ukuthi ivele eduze kwe-flash? Othile ungitshele ukuthi ngenze kanjani!?
Ngikwenza kanjani lokho uhhafu we-luma ungibamba ku-snapchat.
Izinombolo kuzoba yizinsuku obukade ukhuluma ngazo ngenkuthalo ... yingakho ziphuma eduze komlilo 😉
Kusho ukuthini isikwele sezingxoxo ezimpunga?
Kungani i-crescent ingaveli eduze kwe-flash ku-snapchat yami?
Ngabe ukhona owaziyo ukuthi isithonjana esimpunga yini?
Ngabe ukhona owaziyo ukuthi isithonjana somyalezo othunyelwe sisho ukuthini kodwa ngombala ompunga?
Ungumshayeli wemoto yakho, hhayi iGPS
Sibheka inqubekela phambili yeProject Spartan